I-Semalt ichaza indlela yokukhupha idatha efunekayo kwiiwebhusayithi ze-HTML
ayilungelelwanga kakuhle. Iiwebhusayithi ze-HTML zihluke ngendlela equlethe amaxwebhu adibeneyo, kwaye umbhalo ochazwe kumaxwebhu uhlelwe ngaphakathi kwekhowudi ye-HTML.
Kukho iindlela ezintathu zokupasa idatha kwiiwebhusayithi ze-HTML:
Ukugcina itekisi equlethwe kwikhasi lewebhu kwikhompyuter yakho;
Ukubhala ikhowudi yokukhutshwa kwedatha;
Ukusebenzisa amathuluzi okucoca okhethekileyo;
1. Indlela yokukhipha i-HTML kwiwebhsayithi ngaphandle kokubhala ikhowudi
Unako ukucoca iphepha lewebhu ngokusebenzisa amanyathelo achazwe ngezantsi:
Ukukhupha Emva kokuvula iphepha lewebhu eliqulethe umbhalo owufunayo, cofa iqhosha uze ukhethe "Gcina Ikhasi", okanye "Gcina njenge" inketho. Thayipha igama lefayile kwifayile "Igama leFayile" kunye nakwimenyu ehlayo ye "Save As Type", khetha "IWebhu Page, i-HTML kuphela. Cofa iqhosha elithi "Gcina" kwaye ulinde imizuzwana embalwa.
Yonke isicatshulwa kwiphepha icatshulwa kwaye igcinwe njengefayile ye-HTML. Izinketho zokuqala zokufometha iphepha-page zihlala zihambelana, kwaye unokuhlela umxholo kulabo abashicileli bokubhala njenge-Notepad.
Ukukhupha iphepha lewebhu
Khetha "Gcina njenge" okanye "Gcina Ikhasi" njengenketho kwi menu "Ifayile". Emva koko, nqakraza "IWebhu Page, Gcwalisa" ukusuka kwimenyu ehlayo ye "Gcina njengohlobo". Emva kokucofa "Londoloza," umbhalo kunye nemifanekiso kuya kukhishwa kwiphepha kwaye igcinwe naphi na ukufunayo. Isicatshulwa sifakwe kwifayile ye-HTML ngelixa imifanekiso igcinwa kwifolda.
2. Ukukhipha i-HTML kwiziko lewebhu usebenzisa i-coding
Unokusebenza ngokuthe ngqo kwiifayile ze HTML usebenzisa izixhobo ezizodwa. Kwakhona, unokwenza ikhowudi ukususa onke amathegi e-HTML kwaye ugcine umbhalo oqulethwe kwiifayile ze HTML usebenzisa i-XPath okanye ibonakaliso rhoqo. Ezinye zeelwimi ezidumileyo zelwimi kulo msebenzi ziquka iPython, Java, JS, Hamba, PHP kunye neNodeJs.
3. Ukusebenzisa izixhobo zokucoca idatha yewebhu
Ukuba ufuna nje ukukhipha iifayile ze HTML kwiwebhsayithi ngaphandle kokubhala umgca owodwa wekhowudi okanye ugweme ukuhlushwa kwekopi kunye nenkqubo yokunamathisela, sebenzisa izixhobo ze-web scraping . Enyanisweni, kukho ezininzi izixhobo ezincedo ezinokuvuna ulwazi oluyimfuneko kwiwebhusayithi kwaye liguqule kwifom ehleliweyo. Zama nje ithuluzi elincinane lokutshiza, kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana enye efanelekileyo kakhulu ekufuneni Source .